China Acetonitrile Ukwenziwa kunye neFektri | Abakhululekileyo
Ubukho bethu beHlabathi
CAS Hayi: Ngama-75-05-8
Intengiso: IYurophu / India
Inkangeleko: Ulwelo olungabonakali
Ukucoceka: 99,9% min
Amanzi: 0.03% max
Umbala (Pt-Co): 10 max
I-Hydrocyanic Acid (mg / kg): 10max
Ammonia (mg / kg): 6max
I-Acetone (mg / kg): 25max
I-Acrylonitrile (mg / kg): 25max
Ipropionitrile (mg / kg): 500max
Imali (mg / kg): 0.50max
150kg / igubu, 12Mt / FCL okanye 20mt / FCL
UN No.1648, Class: 3, Ukupakisha iqela: II
Uhlalutyo lweMichiza kunye nohlalutyo lwezixhobo. I-Acetonitrile sisiguquli sendalo kunye nesinyibilikisi yokwahlulahlula i-chromatography, iphepha le-chromatography, uhlalutyo lwe-spectroscopic kunye ne-polarographic kule minyaka idlulileyo. Kuba ubunyulu be-acetonitrile ayifunxi ukukhanya kwe-ultraviolet kuluhlu lwama-200nm ukuya kuma-400nm, iyaphuhliswa njengesinyibilikisi yokusebenza okuphezulu kwe-chromatography yolwelo (HPLC) enobuntununtunu be-10-9.
I-Acetonitrile sisinyibilikisi esisetyenziswa ngokubanzi, esetyenziswa ikakhulu kwi-distillation ye-extraction ukwahlula i-butadiene kwii-hydrocarbon ze-C4. I-Acetonitrile ikwasetyenziselwa ukwahlula ezinye ii-hydrocarbon, njengokuzahlula kwepropylene, isoprene kunye ne-methylacetylene kumaqhezu e-hydrocarbon. I-Acetonitrile ikwasetyenziselwa ukwahlula okhethekileyo, njengokukhupha iiasidi ezinamafutha kwioyile yemifuno kunye neoyile yesibindi, ukuze ioyile ephathwayo ilula, inyulu, kwaye ivumba liphuculwe, ngelixa umxholo weevithamini uhlala ungatshintshanga. I-Acetonitrile ikwasetyenziswa ngokubanzi njengenyibilikisi kumayeza, kwi-pesticide, kwimpahla elukiweyo nakwiplastiki.
I-Acetonitrile ingasetyenziselwa ukudibanisa amayeza amaninzi kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi. Kwizonyango, isetyenziselwa ukuhlanganisa uluhlu lwezinto ezibalulekileyo zamayeza ezinjengevithamini B1, i-metronidazole, i-ethambutol, i-aminopteridine, i-adenine kunye ne-diphenyl khohlo; kwizinambuzane zokubulala izitshabalalisi, isetyenziselwa ukudibanisa inambuzane ye-pyrethroid, i-ethoxycarb kunye nezinye izinto eziphakathi.
Isicoceko seSemiconductor. I-Acetonitrile sisinyibilikisi se-organic esinokuqina okuqinileyo. Inokunyibilika okuhle kwegrisi, ityuwa engaphiliyo, into ephilayo kunye nekhompawundi ephezulu yemolekyuli. Ingacoca igrisi, i-wax, iminwe yeminwe, iarhente yentsimbi kunye nentsalela yokubhobhoza kwisilivere yesilivere. Ke ngoko, ukucoceka okuphezulu kwe-acetonitrile kunokusetyenziswa njengearhente yokucoca i-semiconductor. Izicelo ezizezinye: Ukongeza kwezi zicelo zingasentla, i-acetonitrile inokusetyenziswa njengezinto ezingafunekiyo ze-organic synthesis, catalyst okanye icandelo lotshintsho lwentsimbi olunzima. Ukongeza, i-acetonitrile ikwasetyenziselwa ekulayineni kwilaphu nakwindawo yokutyabeka, kwaye ikwasisimo esomeleleyo sokunyibilikiswa kwechlorinated
Inkampani kaRhulumente enamava angaphezulu kweminyaka engama-30;
Umgangatho ophezulu we-HSE mveliso;
☑ Imveliso evunyiweyo ngamazwe ngamayeza eYurophu;
Grade grade Electronic iyafumaneka
Sineenkqubo zolawulo lomgangatho opheleleyo, ezingaphelelanga kwisampulu, indlela yohlalutyo, ukugcinwa kwesampulu, inkqubo yokusebenza esemgangathweni;
☑ AmaFreemen aqinisekisa ukugcinwa komgangatho, inkqubo engqongqo yolawulo lotshintsho iyalandelwa, kubandakanya inkqubo kunye nezixhobo, izinto zokwenza imveliso, ukupakisha;
☑ Isampuli inokufika ezandleni zakho ngaphakathi kweentsuku ezingama-20 kubathengi bamanye amazwe;
Ubuncinci bobungakanani be-odolo busekwe kwiphakheji enye;
☑ Siza kwenza ingxelo kwimibuzo yakho kwisithuba seeyure ezingama-24, iqela lezobuchwephesha elizinikeleyo liya kulandela kwaye likulungele ukunika izisombululo ukuba unesicelo;
Wamkelekile umnxeba ukuze ufumane ezinye iinkcukacha!
Okulandelayo: I-2,6-Diethyl-4-methylaniline (DEMA)
Sisoloko sikulungele ukukunceda.
Nceda unxibelelane nathi kwangoko.
Lwedilesi: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Shanghai 200030 China
Ifowuni: + 86-21-6427 9170
Suite 22G, Shanghai Investment Investment Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Shanghai 200030 China
(R) -3-Aminobutanol, I-CAS 453-18-9, Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl, CAS 3003-25-2, 2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3,